Trinet Web Development
FAQ 1 - Project အပ်နှံခြင်း
လာအပ်တဲ့နေ့မှာ 50% သွင်းပြီးတာနဲ့ လိုချင်တဲ့ Domain Name ကို availability checking လုပ်ပြီး ချက်ချင်း Register လုပ်ပေးပါမယ်။ Hosting နဲ့ တစ်ခါတည်း ချိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် email များလည်း စတင်အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါလာတဲ့ Data တွေနဲ့ Design Team က Layout စဆွဲဖို့ Design နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးမှာပါ။ Working Day (၄) ရက်၊ (၅) ရက် ခန့်မှာ Layout Design ကြည့်ရမယ့် Link ကို email နဲ့ ပို့ပေးပါမယ်။ Design ကို ကြည့်ရှုပြီး Colour Theme, Content Position, Product/Item/Service Highlight စသည်တို့အားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သည်အထိ Designer က Review / Revision ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။ Final Design ရပြီဆိုပါက Developer များက Coding စရေးမှာပါ။ Frame ချသည့်အဆင့် ပြီးစီးပါက Content များ၊ Page များ စတင်ထည့်သွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချိန်မှာတော့ Data တွေရသလောက် အားလုံးပေးသွားဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးသလောက် Beta Version / Preview Site မှာ Client မှ အချိန်မရွေး ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သည်များကိုလည်း မှာကြားနိုင်ပါတယ်။ ( Data များလိုအပ်သေးရင် ဒီ Step မှာပဲ စောင့်ဆိုင်းပေးမှာပါ ) Page များအားလုံး / Website တစ်ခုလုံး ပြီးစီးပြီ ဆိုပါက Project Sign-Off ပြုလုပ်ပါမယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျန်ငွေ 50% ကို Client မှ ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး မှ Website Live ပြုလုပ်ပေးပါမယ်။ လစဉ်အခမဲ့ Maintenance ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Data အသစ်များ၊ Content အသစ်များ၊ Website Update ပြုလုပ်ခြင်းများကို လိုအပ်သလို 1 လ 1 ကြိမ် အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။
FAQ2- Trinet မှလုပ်ပေးသော ဟာ ဖုန်းမှာအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရလား
ရပါတယ်။ Responsive Website Design ဖြစ်တဲ့အတွက် Mobile, Tablet Device များမှ ကြည့်ရှုပါက (သာမာန် Website မျာကဲ့သို့ ချူံ.ချဲ. လုပ်စရာမလိုဘဲ) Mobile Application များအသုံးပြုသကဲ့သို့ လက်ဖြင့် Touch လုပ်ခြင်း၊ Scroll လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် အလိုအလျောက်လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ ထိုသို့ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Phone ထဲသို့ Application ထည့်သွင်းစရာမလိုပါဘူး။ Smart Phone တိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Web Browser မှ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်ရဲ့ Website ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ Mobile Phone အသုံးပြုသူ၊ Tablet များမှ Internet ကြည့်ရှုသူ၊ Desktop/ Laptop များမှ Internet အသုံးပြုသူများ အားလုံး လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဤသို့ လိုက်လျောညီထွေစွာ အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲရာတွင် Font Size / Text များသည် Mobile တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သော အရွယ်အစားသို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်း၊ Photo / Image များသည် မည်သည့် Mobile Phone Size နှင့် မဆို ကြည့်ရှုနိုင်သည့် Size များဖြစ်သွားခြင်း၊ Form များကို Phone ဧ။် Keypad မှ လွယ်ကူစွာ ဖြည့်နိုင်ခြင်း၊ Button/ Menu များသည် လက်ဖြင့် Touch ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူသည့် အနေအထားသို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် Responsive နည်းပညာဖြင့် ဖန်တီးတည်ဆောက် ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
FAQ3- အခြား Company မှာလုပ်ထားသော Website အား Trinet မှာအသစ်လုပ်လို့ရလား
ရပါတယ်။ အဲဒီ ရှိပြီးသား Domain ကို Trinet မှ အခမဲ့ပေးမည့် Hosting Sever သို့ Point လုပ်ကာ သင့်ရဲ့ Website အသစ်တက်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ (သို့) Trinet မှ Website အား သင့် ရှိပြီးသား Hosting သို့ တင်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။
Room 408, 12+1 Parami Condo, Hlaing Township, Yangon.
+95-9-440 188 388,, 440 188 488
Copyright: 2018 . Design and Developed by Trinet Co., Ltd.